Gịnị mere e ji ọ fọrọ nke nta ka ekwe Ibu Ibu na-agụ iTunes Audio akwụkwọ ndị na-Android?
Inwe akwụkwọ ọdịyo bụ otu n'ime ihe ndị kasị akpali na-akpali akpali ahụmahụ na i nwere ike n'oge. Inwe ike na-ege ntị ka akwụkwọ ọdịnaya gụpụta site a ọkachamara ewepu na hassle nke inwe a akwụkwọ gị akpa dum oge, na i nwere ike inwe ọtụtụ puku ha na gị na PC ma ọ bụ na laptọọpụ, nke bụ n'ezie mma. Otú ọ dị, ọtụtụ akwụkwọ ndị na-agụ na-eji iTunes ịzụta na-echekwa ha akwụkwọ, na mgbe ọ na-abịa na-eme a nnofega kwupụta Android omume, mgbe ahụ, ụfọdụ mbipụta agbasaghị egosi, na nke ahụ bụ ihe ị na-aga aka ịghọta n'ihi na n'aka.
Isi nke na-abịa ebe a bụ nnọọ mfe nghọta. Nanị tinye, iTunes ọdịnaya, ọ ga-abụ akwụkwọ egwuregwu na na nwere kpọmkwem DRM na nke ahụ bụ agaghị ekwe omume iji wepụ aka. Apple-eji nke a DRM iji jide n'aka na ọdịnaya ebe a na-anọgide unpirated na emetụta. N'ihi nke ahụ, ọ bụghị nanị ọ bụ nnọọ ike ịrụ a, ọ bụ nakwa iwu na-akwadoghị na ị na-maa aga nwere ike oge na-eme otú ahụ.
N'ezie, ọ bụrụ na ị na-mkpa ịrụ a, ị nwere ike na-agbalị ole na ole ngwa na ga-ewetara gị DRM mwepụ ike, ma ọ nwere ike ịbụ otu obere ike iji chọpụta na-eji ha n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Bụ n'ebe ọ bụla ngwa na pụrụ inyere m aka?
N'ụzọ dị mwute, e nweghị ngwa kere kpọmkwem wepụ-echebe site iTunes audiobooks, na n'ihi na nke na ọ pụrụ ịbụ otu obere ike ịhụ otu na ike inyere. Ma, e nwere ihe ole na ole ngwaọrụ nke nwere ike na-enwe ike inyere gị aka n'agbanyeghị.
iSyncr Android bụ oké ngwọta nke ga-enyere gị aka nyefee ọdịnaya mkpa ka ị Android, ihe niile ị chọrọ ime bụ iji wụnye desktọọpụ ahịa nke ga-ozugbo jikọọ na gị iTunes nwụnye. Ozugbo na e mere, ị ga-enwe ike iji wụnye Android ahịa na mgbe ahụ idetuo ọdịnaya na ị chọrọ, ihu ọma niile audiobooks na ịtụnanya results.
Nweta ya ebe a: http://www.jrtstudio.com/iSyncr-iTunes-for-Android
iTunesForAndroid enye gị ohere igosi otu ihe, na mkpa ka i soro ihu ọma otu nzọụkwụ, na a usoro nke ahụ bụ nnọọ mfe ịghọta mgbe nile! The ngwa bụ n'efu na ọ na-achọ echichi nke ihe Android ahịa iji arụ ọrụ kwesịrị ekwesị!
Nweta ya ebe a: http://www.itunes2android.com
Easy ekwentị-awụ ọsọ n'ugwu
Easy ekwentị-awụ ọsọ n'ugwu-eme ka ọ ọbụna mfe agafeta audiobooks ebe ọ nwere nnọọ ezi na a pụrụ ịdabere ngwá ọrụ na i nwere ike iji na mgbe nile, na pụrụ iche results ma kpọmkwem interface. E nwere ihe a free na akwụ ụgwọ version, ma na-arụ ọrụ nnọọ nke ọma na-enye a siri ike ahụmahụ!
Nweta ya ebe a: http://easyphonetunes.com/download/download.html
doubleTwist bụ ihe ọzọ ngwọta maka ọrụ a! Gịnị na-eme ugboro abụọ ighikota kwụpụta bụ otú mfe iji na a pụrụ ịdabere na usoro bụ, na-arụpụta adịghị akwụsị na-egosi. Ị ga-amasị ụzọ na ngwa na-arụ ọrụ na ya pụta bụ nnọọ mma!
Ka ị pụrụ ịhụ, ọ bụ nnọọ mfe na-akpali akpali ịrụ a, na-arụpụta bụ karịa mmasị. N'ezie, nke a abụghị ezigbo ihe na-eme, na mgbe ụfọdụ, na-adabere audio, ọ pụrụ buru nnọọ oge ụfọdụ na-ọrụ mere, ma na ọgwụgwụ i nwere na-atụkwasị obi na ngwá ọrụ dị ka ọ ga-enye gị ihe kasị mma kwere omume nsonaazụ ndị ị nwere ike inwe, dị ka ngwa ngwa ha nwere ike nyere, n'ezie.
Nweta ya ebe a: https://www.doubletwist.com
Olee otú iji tọghata iTunes akwụkwọ ọdịyo dị ka MP3 faịlụ
Iji ịrụ a usoro ị nwere ike ịlele AAC ka MP3 Audiobook Ntụgharị nke anamde akwa utom ke importing ọdịyo akwụkwọ sitere n'aka iTunes na-enye gị tangible results na ị na-aga ghọta.
Isi echiche a na a na ngwa bụ na ọ ga na-agbalị unprotect audiobook na music si a dịgasị iche iche nke na-echekwa, gụnyere iTunes.
Ị ga-mkpa wụnye ngwa mbụ, wee mbubata audiobooks si iTunes. Ozugbo na e mere, ị ga-họrọ audiobooks. Nzọụkwụ na-esonụ-achọ ka ị họrọ mmepụta faịlụ dị ka MP3, na mgbe ahụ na-amalite akakabarede usoro. Chere ruo mgbe ihe niile na-okokụre na ọ bụ ya.
Nke a bụ ihe ị ga-eme iji nyefee iTunes audiobooks ka Android na a ọkachamara n'ụzọ. Cheta na mgbe e nwere enweghị ukara usoro ịrụ Android, ndị a ngwa ọdịnala pụrụ inyere gị aka ime ọrụ, na ị ga-eji ha dị ka mgbe bụ omume ma ọ bụrụ na ị chọrọ ngwa ngwa audiobook akakabarede mere na ọ suut Android.
Olee otú Idozi Kasị Common iTunes Nsogbu
Free Tag Editor maka iTunes - MusicBrainz Picard
> Resource> iTunes> otú nyefee iTunes Audio Akwụkwọ ka Android Devices